အသက်တွေကြီးလာရင် ဒါတွေပြင်ဖို့ လိုတယ်...... -
အသက်တွေကြီးလာရင် ဒါတွေပြင်ဖို့ လိုတယ်……
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတွေကြီးကြီးပါ။ ခုမအိုသေးပေမဲ့ ဖတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် ကာ ကွယ် ဖို့ ပြင်ဆင်ချိန်ရသလို၊ ကိုယ့် မိဘတွေအတွက် ဆန်းစစ် ဆင်ခြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
အကြံလည်းပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ၊ ဘာသာရေး ရူ့ ဒေါင့်ကနေ မ ဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဘဝရူ့တောင့် ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်….
၁။ အိုဖေါ် : လင်အိုမယားအို မေတ္တာကောင်းမွန်နေဖို့လိုပါတယ်။
အရင်တုန်းက ချစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ တစ်ယောက်မျက်နာ တစ်ယောက်ကြည့် မရတာ မျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။
ယော့က်ျားက သားဘက်၊ မိန်းမက သမီးဘက် ပိုရပ်တည်တာမျိုး မဖြစ်ရဘူး။ ငယ်ရွယ်တုန်းက လင် မယား ဆိုပေမဲ့ အိုလာရင် အဖေါ် မွန်ဖြစ်ဖို့၊ ရပ်တည်ချက်တူညီဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ယော့က်ျားပိုက်ဆံရှာ၊ ယော့က်ျား အင်အားကောင်းတော့ အပြင်မှာ ပွေချင် တိုင်း ပွေ၊ သောက်စားချင် တိုင်း သောက် စား၊ အိမ်ကမိန်းမကို ခိုင်းဖတ်လိုသဘောထားပြီး အော်လိုက် ငေါက်လိုက် လုပ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဟာ၊ အိမ်ထောင်သက် အနှစ် ( ၂၀ ) နောက်ပိုင်း မှာ သားသမီး တွေ ကြီးလာရင် သားသမီးများက အမေဘက်က ရပ်တည်တာ ခပ်များများဆိုတော့ အရင်က ခံခဲ့သ မျှ ရန်ညိုး ပြန်ဆပ်တတ်တယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်အသက်ကြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ့်ကို တကယ်ကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်က သူတို့ အပေါ် အရင်ကောင်းထားရတယ်။
၂။ အိုသိုက် : နေဖို့ထိုင်ဖို့ အိမ်တစ်လုံး ရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ကိုလည်း မသေမချင်း ထိမ်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်က မကြာမှီသေတော့မယ်ဆိုပြီး စောစောစီးစီးထုခွဲပြီး အမွှေမခွဲပေးလိုက်နဲ့၊ ကိုယ်နေဖို့ ပျောက် သွားနိုင်တယ်။ မပျောက်သွားတာ တောင်မှ သားသမီးမျက်နာ ( သို့ ) ချွေးမနဲ့ သမက် မျက် နာ ကြည့် ပြီး အသက်ရှင်ရတာ မတန်ဘူး။
၃။ အိုစာ : အိုစာမင်းစာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ရွှေဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်ဆံဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ် ချန် ထား ရတယ်။
သားသမီး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ အရင်းအနီး မရှိဘူးဆိုပြီး အကုန်ထုတ် မပေးလိုက်နဲ့၊ အားလုံးပေး လိုက် ရင် အိမ်ကဆင်းသွားရနိုင်တယ်။
အချစ်ရဲ့သဘာဝဟာ နောင်မျိုးဆက်ကိုပဲ ဆင့်ပွားပါတယ်။ သားသမီး ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သတ္တဝါ တိုင်း ရဲ့ မွေးရာပါ သဘာဝဖြစ် ပါ တယ်။ မိဘကိုရိုသေတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေး အဆုံးအမ နဲ့ သွန်သင်ယူရတယ်။ မွေးမြူယူရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မသေချာတတ်ဘူး။
မိဘများဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောက်ကို အပြုံးမပျက် ကျွေးမွေးနိုင်ပေမဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောက် ဟာ မိဘ နှစ်ပါးကို ဆူပုတ်လောက် အောင် ကျွေးမွေးရတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံတစ်ခုကို ကြား ဖူးပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မအိုသေးခင်မှာ ကိုယ့်အတွက် အိုစာချန်ပါ။
၄။ အိုရေး : အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကို အတိုကောက်ရေးလိုက်တာပါ။ အိုလာရင် ကိုယ့် ကျန်း မာ ရေး ကို ကိုယ်ဂရုစိုက်ရတယ်။
မနက်တိုင်းလမ်းလျှောက်တာမျိုး၊ အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုး ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ ကောင်း ကောင်း မလျှောက်နိုင်ရင်လည်း ၊ လုပ်ရှားနိုင်သမျှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ် လက် လုပ်ရှား ပေးသင့် ပါ တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် ပါ မဟုတ်၊ သားသမီး များအတွက် ပါ လဒ်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကိုယ့် အ တွက် သိပ်မပူရရင် သူတို့အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်လို့ရတာပေါ့ ၊
၅။ အိုစိတ် : အိုလာရင် စိတ်နေစိတ်ထား မှန်မှန်ကန်ကန် ထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်အသုံး မကျ တော့ဘူးဆိုပြီး မသိမ်ငယ်သင့်ပါဘူး။ သေခြင်းတရားကို တွေးတောပြီး ကြောက်မနေသင့်ပါဘူး။
မေ့မေ့လျော့လျော့ နေထိုင်သင့်ပါတယ်။ တစ်ရက်အသက်ရှင်ရင် တစ်ရက်အမြတ်ပဲ၊ တန်အောင် အသက်ရှင် ရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မွေး မြူ ရပါမယ်။
ကျန်းမာရေး အဆင်ပြေရင် အလှူပွဲတွေ၊ ကူ ညီ မူ လုပ်ရှားမူတွေ ၊ ဘာသာရေး ပွဲတွေ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေပြီး တော့မှ ပါဝင်လုပ်ရှား သင့် ပါ တယ်။ စိတ်ဓါတ်ရွှင်လန်းပြီး သန့်သန့် ပြန့်ပြန့် နေထိုင်သင့်ပါတယ်။
အသက်ကြီးသူများ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းမြေ့ နိုင်ကြပါစေ။
အသကျတှကွေီးလာရငျ ဒါတှပွေငျဖို့ လိုတယျ……
ကြှနျတျောတို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတှကွေီးကွီးပါ။ ခုမအိုသေးပမေဲ့ ဖတျထားရငျ ကိုယျ့အတှကျ ကာ ကှယျ ဖို့ ပွငျဆငျခြိနျရသလို၊ ကိုယျ့ မိဘတှအေတှကျ ဆနျးစဈ ဆငျခွငျလို့ ရနိုငျပါတယျ။
အကွံလညျးပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရငျ ဘာတှပွေငျဆငျထားသငျ့သလဲ၊ ဘာသာရေး ရူ့ ဒေါငျ့ကနေ မ ဟုတျပဲ လကျတှေ့ ဘဝရူ့တောငျ့ကနေ ဆှေးနှေးကွညျ့ရအောငျ….
၁။ အိုဖျေါ : လငျအိုမယားအို မတ်ေတာကောငျးမှနျနဖေို့လိုပါတယျ။
အရငျတုနျးက ခဈြခဲ့ကွပမေဲ့ အသကျကွီးလာတော့ တဈယောကျမကျြနာ တဈယောကျကွညျ့ မရတာ မြိုး မဖွဈသငျ့ဘူး။
ယော့ကျြားက သားဘကျ၊ မိနျးမက သမီးဘကျ ပိုရပျတညျတာမြိုး မဖွဈရဘူး။ ငယျရှယျတုနျးက လငျ မယား ဆိုပမေဲ့ အိုလာရငျ အဖျေါ မှနျဖွဈဖို့၊ ရပျတညျခကျြတူညီဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ငယျငယျတုနျးကတော့ ယော့ကျြားပိုကျဆံရှာ၊ ယော့ကျြား အငျအားကောငျးတော့ အပွငျမှာ ပှခေငျြ တိုငျး ပှေ၊ သောကျစားခငျြ တိုငျး သောကျစား၊ အိမျကမိနျးမကို ခိုငျးဖတျလိုသဘောထားပွီး အျောလိုကျ ငေါကျလိုကျ လုပျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဟာ၊ အိမျထောငျ သကျ အနှဈ ( ၂၀ ) နောကျပိုငျး မှာ သားသမီး တှေ ကွီးလာရငျ သားသမီးမြားက အမဘေကျက ရပျတညျတာ ခပျမြားမြားဆိုတော့ အရငျက ခံခဲ့သ မြှ ရနျညိုး ပွနျဆပျတတျတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကိုယျအသကျကွီးတဲ့အခါ ကိုယျ့မိနျးမ ကိုယျ့ကို တကယျကောငျးစခေငျြရငျ ကိုယျက သူတို့ အပျေါ အရငျကောငျး ထားရ တယျ။
၂။ အိုသိုကျ : နဖေို့ထိုငျဖို့ အိမျတဈလုံး ရှိထားဖို့လိုပါတယျ။ အဲဒီအိမျကိုလညျး မသမေခငျြး ထိမျးထားဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျက မကွာမှီသတေော့မယျဆိုပွီး စောစောစီးစီးထုခှဲပွီး အမှမေခှဲပေးလိုကျနဲ့၊ ကိုယျနဖေို့ ပြောကျ သှားနိုငျတယျ။ မပြောကျသှား တာ တောငျ မှ သားသမီးမကျြနာ ( သို့ ) ခြှေးမနဲ့ သမကျ မကျြ နာ ကွညျ့ ပွီး အသကျရှငျရတာ မတနျဘူး။
၃။ အိုစာ : အိုစာမငျးစာကို ဆိုလိုပါတယျ။ ရှဖွေဈဖွဈ၊ ပိုကျဆံဖွဈဖွဈ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျ ခနျြ ထား ရတယျ။
သားသမီး စီးပှားရေးလုပျဖို့ အရငျးအနီး မရှိဘူးဆိုပွီး အကုနျထုတျ မပေးလိုကျနဲ့၊ အားလုံးပေး လိုကျ ရငျ အိမျက ဆငျးသှား ရနိုငျ တယျ။
အခဈြရဲ့သဘာဝဟာ နောငျမြိုးဆကျကိုပဲ ဆငျ့ပှားပါတယျ။ သားသမီး ကို ခဈြတယျဆိုတာ သတ်တဝါ တိုငျး ရဲ့ မှေးရာပါ သဘာဝ ဖွဈပါတယျ။ မိဘကိုရိုသတေယျဆိုတာ ဘာသာရေး အဆုံးအမ နဲ့ သှနျသငျယူရတယျ။ မှေးမွူယူရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မသခြော တတျ ဘူး။
မိဘမြားဟာ သားသမီး ( ၁၀ ) ယောကျကို အပွုံးမပကျြ ကြှေးမှေးနိုငျပမေဲ့၊ သားသမီး (၁၀ ) ယောကျ ဟာ မိဘ နှဈပါးကို မိဘ နှစ်ပါး ကို ဆူပုတ်လောက်အောင် ကျွေးမွေးရတယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံတဈခုကို ကွား ဖူးပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့ မအိုသေးခငျမှာ ကိုယျ့အတှကျ အို စာ ခနျြ ပါ။
၄။ အိုရေး : အိုတဲ့အခါမှာ ရှိတဲ့ကနျြးမာရေးကို အတိုကောကျရေးလိုကျတာပါ။ အိုလာရငျ ကိုယျ့ ကနျြး မာ ရေး ကို ကိုယျ ဂရုစိုကျ ရ တယျ။
မနကျတိုငျးလမျးလြှောကျတာမြိုး၊ အဖှဲ့လိုကျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာမြိုး ပါဝငျသငျ့ပါတယျ။ ကောငျး ကောငျး မလြှောကျနိုငျရငျလညျး ၊ လုပျရှားနိုငျသမြှ အတတျနိုငျဆုံး ကိုယျ လကျ လုပျရှား ပေးသငျ့ ပါ တယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျခွငျးဟာ ကိုယျ့ အ တှကျ ပါမဟုတျ၊ သားသမီး မြားအတှကျ ပါ လဒျတဈပါးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ကိုယျ့ အ တှကျ သိပျမပူရရငျ သူတို့အလုပျကို ကောငျး ကောငျး မှနျ မှနျ လုပျ လို့ ရ တာပေါ့ ၊
၅။ အိုစိတျ : အိုလာရငျ စိတျနစေိတျထား မှနျမှနျကနျကနျ ထားတတျဖို့လိုပါတယျ။ ကိုယျအသုံး မကြ တော့ဘူးဆိုပွီး မသိမျင ယျသငျ့ ပါဘူး။ သခွေငျးတရားကို တှေးတောပွီး ကွောကျမနသေငျ့ပါဘူး။
မမေ့လြေ့ော့လြော့ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။ တဈရကျအသကျရှငျရငျ တဈရကျအမွတျပဲ၊ တနျအောငျ အသကျရှငျ ရမယျ ဆိုတဲ့ စိတျမြိုး မှေးမွူ ရပါမယျ။
ကနျြးမာရေး အဆငျပွရေငျ အလှူပှဲတှေ၊ ကူ ညီ မူ လုပျရှားမူတှေ ၊ ဘာသာရေး ပှဲတှေ ကိုယျ တတျနိုငျ တဲ့ ဘကျ က နေ ပွီးတော့မှ ပါဝငျလုပျရှား သငျ့ ပါ တယျ။ စိတျဓါတျရှငျလနျးပွီး သနျ့သနျ့ ပွနျ့ပွနျ့ နထေိုငျသငျ့ပါတယျ။
အသကျကွီးသူမြား အားလုံး ကနျြးမာခမျြးမွေ့ နိုငျကွပါစေ။
သားသမီးကို ဖျက်ဆီးလိုက်သော မိဘထဲမှာ သင်မပါဝင်ဖို့ ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေ ၁ ။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တတ်သောဖခင် ဖခင်က အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တော့ မိခင်နဲ့ခဏခဏ ပြဿနာတက်တယ် ။ အိမ်မှာနေ့တိုင်းဆိုသလို တိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ ဘယ်သူ့မှ သားသမီးကို မကြည့်အားဘူး ။ သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ကို အရမ်း ထိခိုက် စေပါတယ် ။ ကိုယ့်အဖေကိုကြည့်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုမဲ့အရွယ် ရောက်နေတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း လုံးဝမစဉ်းစားရဲတာကို တွေ့ဖူးတယ် ။ ၂ ။ စိတ်ကြီးတဲ့ဖခင် နည်းနည်းဆို ဆူပြီ၊ ထစ်ကနဲဆို လက်ပါပြီ၊ ( ၆ ) နှစ်အောက်ခလေး ဒီလိုဖခင်မျိုးနဲ့တိုးရင် ချစ်စရာ အမူအကျင့်လေးတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး …
ပူတာအို ရေခဲတောင်ပေါ်က ပိုးကောင်ဆေးပင်လေးများ
Users Yesterday : 1937
Total views : 791972